व्यवसायीलाई अवसर, यात्रुलाई सास्ती | SouryaOnline
व्यवसायीलाई अवसर, यात्रुलाई सास्ती
सौर्य अनलाइन २०७५ माघ २४ गते ६:४६ मा प्रकाशित
खाँदबारी । केही दिनअघि खाँदबारीबाट इटहरीसम्म जान एउटा ल्याडरोभर जीप हिँड्यो । तुम्लिङटारमा पुगेपछि थप मानिस चढाउन रोकियो । को १ ज ३४९६ नम्बरको १४ सिटको त्यो गाडीमा मानिस त भरिए । तर, लगत्तै चालकलाई आएको फोनले गाडी खाँदबारीतिरै फर्कियो ।
चालकले भने, ‘२० किलो रुद्राक्ष काठमाडौं लैजानु छ रे !, ३५ हजार रुपैयाँ दिने भनेको छ ।’ दुई किलोमिटर उल्टो फर्केपछि रुद्राक्षले भरिएको अर्को जीप नजिकै भेटियो । त्यहाँ रहेको जीपमा टनाटन रुद्राक्ष थियो । जीपभित्र र छतमा समेत रुद्राक्षका बोरा थिए । ‘धेरै लोडले पत्ती भाँच्चिएपछि गाडी चेन्ज गर्न लागिएको हो,’ जीपकै एक जना कर्मचारीले सुनाए । रुद्राक्ष तीन जना चिनियाँ नागरिकले काठमाडौं लैजाँदै थिए ।
धमाधम एक जीपबाट अर्को जीपमा रुद्राक्ष सारियो । छत भरियो । बाँकी रहेको रुद्राक्ष भित्र राख्न थालियो । तीन चिनियाँले पूरै जीप खाली गर्न भने । दुई घण्टादेखि पर्खिसकेका यात्रुहरू जीपबाट झर्नुपर्दा रन्किए । केही समयको विवादपछि रुद्राक्ष बोक्न पुगेको जीपले अर्को जीप बोलाएर यात्रुलाई त्यसमा पठायो ।
संखुवासभामा हुने रुद्राक्ष खेतीले व्यवसायीलाई अवसर दिएको छ भने यात्रुलाई सास्ती ! यात्रुवाहक सवारी साधनलाई सामान ढुवानीमा प्रयोग गरिंदा यात्रु समस्यामा परेका हुन् । यात्रु बोक्ने गाडीले रुद्राक्ष बोकेर कुदिरहँदा समेत सम्बन्धित निकाय मौन रहेको यात्रुको गुनासो छ । ‘चढिसकेका हामीलाई दुई घण्टा अल्मल्याएर अलपत्र पारियो,’ जिपमा चढेका यात्रु सन्देश न्यौपानेले भने, ‘पैसाका लागि यसरी अल्मलाएर राख्न मिल्छ ? ’ उनले यात्रु बोक्ने गाडीले सामान बोकेकोमा आपत्ती जनाए ।
प्रहरीका अनुसार यात्रु बोक्ने गाडीले सामान ढुवानी गर्नु नियमविपरीत हो । ‘यस्तो काम गैरकानुनी हो,’ अस्थायी जिल्ला ट्राफिक पोस्ट खाँदबारीका प्रमुख असई मानबहादुर खत्रीले भने, ‘चेकजाँचको समयमा फेला परे यात्रुबाहक सवारी साधनलाई कारबाही गर्छौं ।’
यात्रुवाहक गाडीलाई सामान बोक्न निरुत्साहित गर्न कारबाही स्वरूप जरिवाना लिने गरिएको उनले बताए । तर, संखुवासभामा यात्रु बोक्ने गाडीले निर्बाध सामान ओसारिरहेका छन् । झन् रुद्राक्षको कारोबार हुन थालेपछि बढी पैसा कमाउने लोभमा यात्रुलाई बिचल्ली बनाएरै रुद्राक्ष ढुवानी हुने गरेको छ ।
‘केही दिनअघि चैनपुरमा पनि सामान चढाउने हुँदा गाडीले चार घण्टा ढिलो गरेको थियो,’ काठमाडौंबाट आएका विशाल बिसीले भने, ‘दुई चार सयको लोभमा यात्रुलाई सास्ती दिन त भएन नि ।’ उनका अनुसार जीपले यात्रुहरू कोचाकोच गरेर चढाउने गरेका छन् । तीन जना अट्ने सीटमा चार जना चढाउने गर्छन् । ‘चार जना अट्ने ठाउँ हुँदैन । गाडीमा १० जना पु¥याउनै पर्छ, नत्र घाटा हुन्छ भन्छन्,’ उनले भने, ‘निकै कष्टसाथ यात्रा गर्नुपर्छ ।’
यातायात व्यवसायीहरू भने आफूहरूले सामान ढुवानी नगरेको दाबी गर्छन् । टिकट काउन्टरबाट आफू सम्बन्धित कुनै पनि यात्रुवाहक यातायातले सामान ढुवानीको नगरेको संखुवासभा यातायात प्रालिका सदस्य रोशन थापामगरले बताए । ‘सार्वजनिक यातायातमा कसैले आफ्नो प्रयोजनका लागि थोरै सामान लैजान्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘तर मालवाहक गाडीकै रूपमा भने प्रयोग गर्न पाइँदैन ।’ रुद्राक्षको व्यापार धेरै हुने भएकाले केहीले एक÷दुई बोरा लैजाने गरेको भए पनि यात्रुलाई नै दुःख भने नदिएको उनले दाबी गरे ।
फिदिम नगरपालिकाको बजेट ९८ करोड ७४ लाख
युवकको हत्या आरोपमा १२ जना कारागार चलान
बाढीले मेलम्चीस्थित फट्टेको पुलमा क्षति
पटेर्वा सुगौली गाउँपालिकाको बजेट ४१ करोड १० हजार
भालुकाे आक्रमणबाट महिला घाइते
सखुवाप्रसौनी गाउँपालिकाको बजेट ५७ करोड ६९ लाख